Exxeo Karazana Piano - Famolavolana
Alahady 12 Septambra 2021
Karazana Piano EXXEO dia Elekanto Hybrid Piano ho an'ny toerana misy ankehitriny. Ny endri-javatra miavaka dia mampiavaka ny onjam-peo telo amin'ny lafiny telo. Ireo mpanjifany dia afaka manamboatra tanteraka ny piano ananany mba hifanaraka amin'ny manodidina azy ho toy ny sangan'asa Fanaingoana. Ity piano avo lenta ity dia vita amin'ny fitaovana Exotic toy ny Carbon Fiber, hoditra automatique automatique ary rafitra Aerospace grade aluminium.Advanced fitaovana fanamafisam-peo; namerina ny sakamalaho mahery vaika an'ny pianô Grand amin'ny alàlan'ny rafitra feo 200 an'ny Watts, 9 feo. Ny bateria fananganana natokana ho an'ny finday dia ahafahan'ny piano manatanteraka hatramin'ny 20 ora isam-bolana.
Anaran'ny tetikasa : Exxeo, Anaran'ny mpamorona : iMAN Maghsoudi, Anaran'ny mpanjifa : EXXEO.
Zoma 10 Septambra 2021
Karazana Piano iMAN Maghsoudi Exxeo